Fitaovana fanodinam-bokatra: zava-dehibe, ny fomba fanaovana azy ary inona izany | Green Renewable
Portillo Alemanina | 28/04/2021 12:50 | fanodinana
Ny iray amin'ireo fako mahazatra indrindra ateraky isan'andro na isan'andro ao an-trano dia ny kapoaka. Kitapo azo ampiasaina lazao fa tokony hatao amin'ny adidy izany satria manampy amin'ny fampihenana ny habetsaky ny akora ampiasaina ary mankasitraka antsika amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Ny famerenana amin'ny laoniny dia iray amin'ireo teknika fampiasa indrindra hampihenana ny famokarana sy fanangonana fako. Ho fanampin'izany, manampy antsika hampihena ny olana mifandraika amin'ny fitantanana tsy fako tsy mahomby.
Noho izany, amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny fomba hamerenany indray ireo alimo alimina sy izay vita aminy.
1 Amboary indray ny fitoeram-alimo alimo
2 Ahoana ny fanodinam-bokatra alimina alimina ary aiza no hametrahana
3 Cans dingana fanodinana
4 Zava-dehibe sy ilaina amin'ny fitoeram-panodinana
Amboary indray ny fitoeram-alimo alimo
Rehefa mieritreritra ilay fitoeram-panangonana mavomavo misaraka isika dia hahatadidy ny plastika foana. Antsoina hoe fitoeran-javatra plastika izy io. Tsy dia izany. Ny karazan-sisa tavela amin'ny fotony dia azo apetraka. Tsy ny plastik ihany no voaodina. Isan'andro Tototry ny filaharana fanodinana entana manan-danja isika ary mora ny mahita kaontenera samy hafa loko amin'ny toerana akaikin'ny toeram-ponenanao. Tsy dia sarotra ny manao fanariam-pako.
Aluminium no saina fahatelo be indrindra eran'izao tontolo izao. Ny crust an'ny tany dia misy ary ampahany amin'ny vatolampy, zavamaniry ary biby. Saingy, ny fitrandrahana azy dia amin'ny alàlan'ny bauxite ihany. Ny bauxite dia mineraly manana atiny avo indrindra amin'ity singa ity. Inona koa, azo aseho tsy misy loto. Izy io ihany no metaly maivana izay afaka manome henjana ankoatry ny fananana maro hafa toy ny fikojakojana, ny fahaleovan-tena, ny fanoherana ny harafesina, ny fitondra herinaratra avo lenta sy ny herinaratra ary ny toetra hafa izay mahatonga azy io ho fitaovana tonga lafatra amin'ny fampiasana indostrialy, fananganana na fananganana. .
Ireo toetra rehetra ananan'ny aliminioma ireo dia nahatonga azy hamerina. Ary izany dia fitaovana izay manana be dia be mampiasa ho an'ny zava-misy tsotra tsy misaraka amin'ny fanodinana. Hita amin'ny ampahany amin'ny tranontsika izy io, mamorona ampahany amin'ny fantsona, kaontenera maivana amin'ny zava-pisotro sy sakafo, fonosana sns. Ny fahita indrindra dia ny mahita alimo ao anaty biriky sy am-bifotsy azo averina madiodio.
Ahoana ny fanodinam-bokatra alimina alimina ary aiza no hametrahana
Efa fantatsika ny fampiasana samihafa ny alimo. Ankehitriny dia tsy maintsy mianatra mamerina manamboatra kapoaka alimo isika. Ho an'ity dia tsy maintsy fantarintsika hoe iza ireo fitoeran-tsimpona voafantina voafantina ho an'ity. Ity no fitoeran-kavo mavo. Natao ho an'ny kaontenera plastika izy ireo tavoahangy, kitapo, cellophane, kaontenera, corks, fitoeram-bokatra polystyrene, Etc.
Saingy mivelatra amin'ny ankapobeny hatrany amin'ny fonosana maivana indrindra izy io na dia misy akora hafa hita ao amin'ny firafiny aza. Ohatra, raha ny boaty vy, satroka sy satroka ary kapoaka aluminium na vy. Fahadisoana iraisana no apetraka ao amin'ny fako mavo fitoerana izay tokony apetraka amin'ny toerana madio toy ny aerosol, fitaovana efa niasa, kilalao ary zavatra metaly hafa izay tsy kaly.
Ny fanodinana aliminioma dia atao amin'ny alàlan'ny fampifangaroana azy amin'ny plastika ao anaty fitoeran-javatra iray ihany mba hahamora ny fitantanana. Raha vantany vao angonin'ireo kamiao ao anaty kaontenera mavo ny fako dia entina amina zavamaniry manasokajy izany. Satria misy milina afaka manao fisarahana amin'ireo fitaovana samihafa napetraka ao anaty kaontenera iray ihany.
Andao hojerentsika inona ny masontsivana ampiasain'ny masinina mba hampisarahana ireo fitaovana samihafa napetraka ao anaty fitoeram-bokatra iray ihany:
Size: amin'ny alàlan'ny karazam-piainana iray dia misaraka ireo fitaovana izay kely kokoa noho ny 8 santimetatra.
Endrika sy hakitroky: Ny arofanina mihetsika dia manasaraka ireo akora mavesatra kokoa eo am-pototry ny lalantsara amin'ireo fitaovana maivana kokoa mety hiakatra. Tetikasa maivana be toy ny fonosana plastika dia azo totofana amin'ny alàlan'ny rafitra fisotroana.
Composition: Ny kapoaka vy sy aliminioma dia nosafidian'ny mpampisaraka magnetika sasany na amin'ny fizotran'ny torolàlana. Amin'izany fomba izany dia noforonina ny onja izay afaka manohitra an'io metaly io.
Cans dingana fanodinana
Misy fifehezana andraisan'ny olombelona anjara. Ny mpandraharaha dia miandraikitra ny fandinihana sy ny fanasarahana ireo zavatra raha ilaina. Ny fisarahana dia tanterahina amin'ny tanana mba hiantohana ny fahombiazan'ny fizotrany. Raha vantany vao navahana tamin'ny sokajy samihafa ireo fitaovana Nalefa tany amin'ny orinasa fanodinana izy mba hampiasaina vaovao sy hampidirina ao amin'ny tsingerin'ny fiainana ireo vokatra..
Raha amin'ny aliminioma dia misy coil lehibe an'ity metaly ity ary forona sy kaontenera vaovao no amboarina. Noho io antony io, raha miresaka momba ny fitoeram-panafody dia mandray anjara amin'ny fananganana canina vaovao isika nefa tsy mila mampiasa indray ny akora sy mandoto ny tontolo iainana. Tamin'ny farany, Marihina fa ny aliminioma dia fitaovana azo haverina simba tanteraka, toy ny amin'ny fitaratra. Afaka amboarina imbetsaka izy ireo nefa tsy very ny fananany na ny toetrany. Misaotra an'izany fa afaka mahazo vokatra avo lenta indray tsy mampiasa akora manta.
Zava-dehibe sy ilaina amin'ny fitoeram-panodinana
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, tokony ho fahita any amin'ny trano rehetra any an-tanàna ny banga fanodinana. Mitombo isan-taona ny famokarana io fako io ary ny fampiasana ireo fitaovana ireo dia mety ho vahaolana amin'ny fandotoana. Mandritra ny dingan'ny fanodinana ny morontsiraka dia mandray anjara amin'ny fampihenana ny entona entona novokarina ho amin'ny atmosfera isika mandritra ny famokarana kapoaka amin'ny fampiasana akora.
Raha ahena ny habetsaky ny entona etona amin'ny habakabaka dia handray anjara amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro isika. Tokony hotadidintsika izany fiovan'ny toetrandro izany izy io dia iray amin'ireo olana ara-tontolo iainana matanjaka indrindra atrehin'ny zanak'olombelona amin'ity taonjato ity. Raha mahavita mampitombo ny famerenana amin'ny laoniny ny kapoaka izahay dia handray anjara betsaka amin'izany.
Araka ny hitanao dia zava-dehibe sy mora be ihany ny fitoeram-panodinana. Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity ianao dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny fomba fanodinana lasitra sy izay tokony hatao amin'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » fanodinana » Kitapo azo ampiasaina